Nhau - Nhanganyaya kune yekunamatira uye yekumesa mamaki ePUR laminating muchina
Nhanganyaya kune yekumhara uye yekumonera maitiro ePUR laminating muchina
1. Wedzera huwandu hweglue yakaiswa. Kana huwandu hweglue hwanyanya kushoma kana pamusoro pechikamu cheiyo substrate isina kuputirwa nekunamatira, zvinozove zvakaoma kuti zvikamu zviviri zvisungiswe panguva yekubatanidza. Tinogona kusarudza anilox roller ine yakadzika sero, kana kuwedzera huwandu hweglue pane substrate pevhu nekuwedzera kumanikidza kwerabha roller uye nekudzora iko kumanikidza kwekubatana pakati pechiremba blade neiyo anilox roller. Kune mamwe epurasitiki mafirimu substrates, corona kurapwa kunogona kuitwa pamberi pekupfeka kuita iyo yemvura fluffy, nokudaro nekuvandudza kugona kweiyo substrate yekumatira kunamatira uye kuwedzera huwandu hweglue pamusoro.
2. Kusarudza tembiricha yakakodzera yekuomesa yakanyanya kukwirira kana kudzikira inokanganisa kubatanidza kutsanya kweiyo firimu inosanganiswa. Kana iyo yakaputirwa substrate yaomeswa, iyo yekudziya tembiricha yakanyanya kukwirira kana mushure mekupisa tembiricha yekubika, pamusoro peiyo yekunamatira ichave yakagadziriswa, nekudaro ichiparadza iko kwekubatanidza kugona kweinonamira. Kana iyo tembiricha yekuomesa yakanyanya kuderera, ruzivo rwemugadziri rwunoita kuti namira isarapwe zvakakwana, iyo yekunamatira viscosity haina kunaka, uye musanganiswa hauna kusimba. Mushure menguva yakati rebei, mabhubu angangoita mufomati inosanganisa, iyo inokuvadza hunhu hwesanganiswa hwechigadzirwa. Ehe, isu tinogona kusarudza inonamira yedhijitari printa ine yakanaka yepamusoro tembiricha kuramba uye kudzosera kusagadzikana kujairana kwakakwirira tembiricha kuomesa, sekushandisa polyurethane inonamira.
3. Wedzera kumanikidzwa kwakakwenenzverwa zvakakodzera. Rakawandisa rinoumba kumanikidzwa kana isina kuenzana kumanikidza kumicheto miviri yeanoumbwa chinotenderera kunokonzeresa kuunyana pamusoro pechinhu chinoumbwa nefirimu, uye tunnels dzisina chinhu dzichaumbwa kumakwenzi mushure mechikamu, izvo zvinokanganisa kubatana kwekukurumidza kwechigadzirwa chapera. Zvakakodzera kuwedzera mukomboni kumanikidza kunobatsira kugadzirisa simba rekubatanidza remubatanidzwa.
Uye zvakare, kuti uvandudze kubatana kweiyo firimu rinoumbwa uye mhando yekurongedzwa kwemukaka, zvinofanirwa kudzivirira nyaya yekune dzimwe nyika, guruva uye mamwe marara kubva kunamatira kune yekunamatira kana kune yakasanganiswa pamusoro peiyo substrate. Mashoko ekupedzisa Paunenge uchishanda, nyatsocherechedza matambudziko akasiyana uye kutadza mukugadzirwa, uye shandisa nzira dziri pamusoro kubvisa kukundikana zvine musoro. Kana paine matambudziko akawandisa kana kukundikana, zvinogona kunge zvisingaite kushandisa imwe nzira. Panguva ino, michina yekupakata inofanirwa kudzivirirwa, ichitarisa kugadzirisa matambudziko akakosha, uye nekuzoshandisa dzimwe nzira kugadzirisa madiki matambudziko rimwe nerimwe.
Post nguva: Kubvumbi-16-2021
Kupisa Melt Glue Anonyorera, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi,